Patchwork A-Line ခါးပတ် Strawberry တံဆိပ်တုံးဂါ ၀ န် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
ချည်ထည် A-Line ခါးပတ်စတော်ဘယ်ရီပုံနှိပ်ခြင်း
$37.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $63.99
အရောင် ပန်းရောင် Black က
အရွယ် M L S XL 4XL XXXL XXL 5XL
ပန်းရောင် / M / တရုတ် ပန်းရောင် / L / တရုတ်။ ပန်းရောင် / S / တရုတ်။ ပန်းရောင် / XL / တရုတ်။ Black က / M / တရုတ် Black က / S / တရုတ် ပန်းရောင် / 4XL / တရုတ် အနက်ရောင် / 4XL / တရုတ် အနက်ရောင် / XXXL / တရုတ် အနက်ရောင် / XXL / တရုတ် Black က / XL / တရုတ် Black က / L / တရုတ် ပန်းရောင် / XXXL / တရုတ် ပန်းရောင် / XXL / တရုတ် အနက်ရောင် / 5XL / တရုတ် ပန်းရောင် / 5XL / တရုတ်
ချည်ထည် A-Line ခါးပတ်စတော်ဘယ်ရီပုံနှိပ်ခြင်း - ပန်းရောင် / M / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း! အလွန်ကြင်နာသောရောင်းသူနှင့်လည်းစားဆင်ယင်အိပ်မက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ !! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!
အဆိုပါဝတ်စုံရုံလှပသောဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား M သည်ကျွန်ုပ်၏ ၁၆၅ စင်တီမီတာနှင့် ၄၈ ကီလိုဂရမ်တွင်ကောင်းစွာထိုင်နိုင်သော်လည်းအရာအားလုံးအဆင်ပြေသော်လည်း S ကိုယူနိုင်သည်။ ဒါဟာရက်ပေါင်း 165 လောက်လာ၏။ 48 ထဲက 20, သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံရကျိုးနပ်
ပုံနှင့်တူသောဤကြည်ညိုဖွယ်ကောင်း။ အရည်အသွေးမြင့်သော ၀ တ်စုံတစ်ခု! ၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၅'၁ ဖြစ်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လွန်းလိမ့်မည်ကိုကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခြေများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေနပ်မိသည်။
လှပတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတစ်ခု၊ ၂ လခန့်ကြာသည်။ ၁၆၅ အမြင့်၊ အလေးချိန် ၅၀ က M ကိုယူသည်။